Ny Spark dia novaina ho 2.5 miaraka amina endrika vaovao, mitahiry PDF ary maro hafa | Androidsis
Spark dia mandeha mahitsy amin'ny stardom amin'ny Android miaraka amin'ny kinova vaovao izany dia miaraka amin'ny fanavaozana 2.5. Ity dia mitondra vaovao mahaliana, indrindra amin'ny fanatsarana ny famolavolana interface sy ny endri-javatra hafa izay manome fampiasa bebe kokoa.
Fampiharana maimaimpoana ho an'ny finday sy izay avy amin'ny iOS amin'ny faniriana rehetra ny hanao zavatra sarotra be ho an'ny sisa amin'ny mpanjifa mailaka ananantsika ao amin'ny Play Store. Ny marina dia ny zavatra rehetra omeny dia miatrika ny iray amin'ireo mpanjifa tsara indrindra izahay ary lasa tianay izy io; Marina fa misy rindranasa karama kokoa.
1 Volavola vaovao, endrika vaovao ary Spark tsara kokoa
2 Tsy mbola fantatrao ve ny Spark?
Volavola vaovao, endrika vaovao ary Spark tsara kokoa
Ireo lehilahy ao ambadiky ny Spark dia miasa ao amin'ny Android ary ankehitriny dia entin'izy ireo mankany amin'ny kinova 2.5 izahay hankafizantsika endrika vaovao, fanaingoana ny bara hametrahana ny fidirana tadiavinay, fandefasana mailaka indray ary ny fahaizana manonta mailaka ary tahirizo ao anaty PDF; Ity safidy farany ity dia tena ilaina tokoa ho an'ireo izay mampiasa ity mailaka ity hiasa isan'andro ao amin'ny orinasa na birao. Aza adino ireo fampiharana teleworking ireo.
Manomboka voalohany amin'ireo mailaka azonay atao pirinty avy amin'ny Spark rehefa mifandray eo an-toerana amin'ny alàlan'ny tamba-jotra WiFi. Ankoatry ny fahafahany manonta azy ireo dia azontsika atao ny misafidy tahirizo ao anaty PDF izy ireo ary alefaso any amin'ny mpiara-miasa izany raha mila manana tapakilan'ny fivoriambe na faktiora avy amin'ny mpamatsy antoko fahatelo eo an-tanana ianao. Zava-baovao izay tena tianay.
Mba hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa dia nampidirin'i Spark izao ny fahaizana manamboatra baraovana ary amin'izany dia "mamorona" azy amin'ny fomba izay mifanaraka amin'ny filantsika manokana. Raha hitantsika fa manana fidirana tsy tonga sy mandeha isika, dia ovainay ho an'ny hafa izay mamela antsika hitahiry bokotra fanalahidy bebe kokoa; Azo antoka fa mandritra ny tontolo andro dia mihoatra ny fotoana sarobidy ananantsika eto an-tanantsika.
Ny asa fandefasana vaovao indray tsy manolo resend, saingy mamela ny fahalalahana bebe kokoa izy io raha ny tokony hampitana an'io mailaka io amin'ny hafa. Misafidy azy isika ary afaka mandefa izany amin'ny mpampiasa hafa. Araka ny efa nolazainay, ny fahafaha-manatsara kokoa rehefa mifanerasera amin'ny mpanjifanay mailaka maimaim-poana.
Mikasika ny famolavolana, Spark amin'ny kinova 2.5 no fanatsarana ny fahitana maso ireo kofehy mailaka mba hahatonga azy ireo ho maoderina sy madio kokoa. Izany hoe, mazava kokoa ny zava-drehetra ary afaka hanavahana ireo kofehy isan-karazany aloha isika, mba hifantoka amin'ny sahirana.
Tsy mbola fantatrao ve ny Spark?
Raha avy liana te hahafanta-javatra ianao ka mbola tsy nanandrana Spark, dia tena mamporisika anao izahay. Indrindra raha manana mailaka matihanina ianao, nanomboka manarona izay ilaina rehetra tadiavin'ny olona iray amin'ny mpanjifa mailaka. Drafitra maoderina, havaozina tsindraindray, manana fitantanana inbox marani-tsaina. Ity toetra farany ity dia iray amin'ireo soatoaviny, satria ny marina dia ny fikirakirany ireo karazana mailaka azontsika tsara mba hametrahana izay mahaliana antsika "eo alohan".
Manana safidy hafa ianao na pitsopitsony tena mandaitra toy ny fahaizana mizara mailaka miaraka amina ekipa amin'ny alàlan'ny rohy azo antoka, na koa ny fahafaha-mamorona mailaka tena izy miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipa hafa. Raha atao teny hafa, miatrika mpanjifa mailaka izahay izay mampiseho fa ireo ao aorin'izy ireo mahalala momba ny fitantanana inbox hanomezana traikefa tsara indrindra.
Ny Spark dia novaina ho 2.5 miaraka amin'ny vaovao mihoatra ny mahaliana amin'ny Android hankafizanao ny fitehirizana mailaka toy ny PDF, endrika vaovao amin'ny kofehy ary ilay bara fanaovana fitaovana izay afaka amboarintsika araka izay tadiavintsika Raha mbola tsy nanandrana azy ianao dia azonao maimaim-poana izao.
Spark Mail avy amin'ny Readdle
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny mpanjifa mailaka Spark dia novaina ho 2.5 miaraka amin'ny fanovana ny famolavolana, ny fitehirizana mailaka ho PDF sy maro hafa
Ny ahy dia hoy izy:
Iray amin'ireo mpanjifan'ny mailaka izay mifanaraka indrindra amin'ny filan'ny mpampiasa, mora ampiasaina ary matanjaka. Lahatsoratra tsara. ?
Valiny ho an'i Demis
Sariho ny maherifonao manokana amin'ny Draw a Stickman: EPIC 3